Zviratidzo zvenyeredzi zveZodiac HAZVISI “Zvekushopera nyeredzi dzenyu” nezvichakuwirai. Zvinotaura pamusoro paKristu nekereke yake
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zviratidzo zvenyeredzi zveZodiac HAZVISI “Zvekushopera nyeredzi dzenyu” nezvichakuwirai. Zvinotaura pamusoro paKristu nekereke yake
Zviratidzo zvenyeredzi zveZodiac HAZVISI “Zvekushopera nyeredzi dzenyu” nezvichakuwirai. Zvinotaura pamusoro paKristu nekereke yake
“Pamaonero angu Donald Trump achakurirwa pasarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzemuna 2016”.
Ichi chinyorwa chevanoita nezvenyeredzi chaive chakanyorwa pane imwe webisaiti. Zvaive zvakaiswa zuva remuna Bambwe 2016. Zvaivewo zvisirizvo zvachose.
Chimwe chinyorwa chemuWashington chenyanzvi munezvenyeredzi chaive naHillary Clinton akakunda zvisina anogona kuzvipikisa, nekuti kushopera kwenyeredzi yake kwairatidza kuti “bato raitonga raizoramba richitonga”. Asi bato rake rakatsvairwa kubva pamasimba zvese paseneti nepakongiresi.
Jeane Dixon, nyanzvi munezvenyeredzi, akashopera kuti Hondo yePasi rese yechitatu yaizotanga muna Gumiguru 1958. Dzaive nhema dzaive pachena.
Mumwe anoita nezvekumwedzi Roger Culver naPhilip Iayna vakatarisa zvakashoperwa nezvenyeredzi zvinosvika 3011 nevanhu vezvenyeredzi vane mbiri vakawana kuti zvikamu gumi chete kubva muzana ndizvo zvega zvinoitika. Izvi zvakangofanana nekunge munhu angoitawo fungidziro asina chokwadi madziri.
Wanano dzinobva pakushopera kwevenyeredzi dzine huwandu hwakafananawo hwekurambana pane dzimwe wanano.
Asi zvisinei kukundikana kwekuva nechokwadi mukushopera kwavo, nyeredzi dzachinyanga dzichiri nemamiriyoni evanhu vanodzitevera pasi rese. Nei?
Makore anosvika 2000 Kristu asati auya vezvenyeredzi vekuBabironi vakaita nzira ine mbiri yekushopera yenyeredzi nekuti vakaita fungidziro dzechokwadi dzekuti vanhu vanoda kwazvo kunzwa zvinhu zvinotaura pamusoro pavo. Musaudze vanhu chokwadi, vaudzei zvavanoda kunzwa pamusoro pavo. Ichi ndicho chakavanzika chekugona kunyengera pfungwa dzevanhu nendangariro dzavo.
Vanhu vakaiswa muhutapwa nefungidziro dzezvaizovawira muhupenyu hwavo. Nei? Vanhu vazhinji vakazadzwa nerudo rwekuzvida. Izvi zvinobva parudo rukuru “rwemaserufi” pasoshari medhiya.
Nhasi chikamu mumapepanhau chakaisirwa “Nyeredzi dzenyu naChinyanga’ ndicho chinoramba chiri pamusoro soro kwazvo pakuverengwa pasi rese. Ndangariro dzevanhu dzakakurudzirwa zvakanyanya nehuchenjeri hwezvakavanzika zvekuBabironi izvi. Kushopera pamusoro peramangwana ndicho chakavanzika chinofadza isu vanhu, uye kurudziro yezviratidzo zvenyeredzi zvekuBabironi yakatora mukombe muzvikamu izvi.
Kuna Zvakazarurwa Chitsauko 17, Mwari akaburitsa pachena muvengi mukuru wechiKristu, uye zita rimwechete rakataurwa ndiro Babironi Yakavanzika. Saka zvakavanzika zveBabironi zvichiri kurarama nanhasi.
ZVAKAZARURWA 17:5 Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: BABIRONI, GUTA GURU, MAI VEMHOMBWE NAVEZVINONYANGADZA ZVENYIKA.
Muprofita Danieri akaona chiratidzo chehushe huna hwemaHedeni, hwaimiririrwa nemucherechedzo wemunhu, aizogamuchira nekukudza zvitendero zvechipegani zvemazuva eTestamente Yekare ozvishandura, apo dare rakabatana mumakumbo rinoshanduka kuva zvidimbu mutsoka, ozvikwanisa zvakachenjera mukereke yeTestamente Itsva.
Mukadzi mucherechedzo wekereke.
II VAKORINTE 11:2 Nokuti ndinegodo pamusoro penyu negodo raMwari; nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kunaKristu semhandara yakachena
Danieri akatanga chiratidzo chake nemusoro wendarama zvaimiririra hushe hweBabironi. Nhasi uno nzvimbo iyi yakudaidzwa kuti Iraq.
Mumusoro ndimo munosikwa mazano. Iraq yanhasi ndiyo nzvimbo yakaberekerwa chitendero chechipegani chakadzama chacho.
Nimrodi, mupanduki mukuru akapandukira Mwari, akatanga hushe hwechitendero uye zvematongerwo enyika hwekutanga panyika munzvimbo imwechete iyi.
GENESISI 10:9 Akanga ari mudzimba mukuru pamberi paJEHOVA; naizvozvo vanoti, "SaNimurodi, mudzimba mukuru pa­mberi paJEHOVA."
10 Ushe hwake hwaka­tanga paBaberi, neEreki, neAkadhi, neKarine, panyika yeShinari.
Mundangariro dzevanhu, zvaifungwa naNimrodi zvaiuya pekutanga zvaMwari zvisati zvauya. Vaiteerera hutungamiri hwake semunhu pekutanga. Zvaitaurwa naMwari zvaive zvisina kukosha kwavari. Saka hutungamiri hwevanhu hwakakura hukaparidza zvitendero zvakaitwa nevanhu apo vanhu vaiedza kuzviponesa kubva kugehena nemabasa avo.
“Baberi” zvinoreva kuti “Suwo revamwari” sezvo raive guta guru rine masvingo makuru aisimudzwa achikwira kudenga. Mwari akavamisa kuvaka akashandura ndimi dzavo kuti vasanzwanane. Saka Baberi rakabva rawana chirevo chitsva, “kukanganisika”. Aya ndiwo maonero aMwari pamusoro pemazano evanhu.
Saka chitendero chakadaidzwa neruzivo rwevanhu uye hutungamiri hwevanhu kuti masuwo evamwari, chakadaidzwa naMwari kuti kukanganisika.
Sargoni akaita hushe hwakazotevera makore akapoteredza 2300 BC munzvimbo iyi, Babironi riri rimwe remaguta acho.
Hammurabi (1792 – 1758 BC) akaita hushe hwakazotevera, Babironi riri guta guru.
Nebuchadnezzari muna 604 BC akazova musoro wendarama wenguva dzeBabironi dzakaita mukurumbira.
Saka simba rezvematongerwo enyika raive ratanga munzvimbo iyi. Asi chiprista cheBabironi, nemabasa avo aive ava panjodzi nekuda kwekusagadzikika kwezvematongerwo enyika kwaizoita kuti varasikirwe nesimba, vakarwisa kuti vatange chitendero chechipegani chakasimba chaive chatangwa kare naNimrodi. Chitendero chakagadzirwa ichi chaive nechinangwa chimwechete, kuti chiite vanhu nhapwa nekubvumirana kwavo nechiprista cheBabironi. Mazano ezvechitendero uye emhemberero aya akabata ndangariro dzevanhu zvekuti chiprista chekuBabironi chakazongochengetedza kurudziro yazvo pamusoro pevanhu zvisinei nekukanganisika kwaive kwaita zvematongerwo enyika. Mbiri yaNebukardinezzari yakawanira chiprista ichi rukudzo rukuru uye nzvimbo inokosha muvanhu. Mukuru weRoma akaita mukurumbira Jurio Kesari akabhadhara chioko muhomwe kuti asarudzwe kuva Pontifex Maximus (muprista mukuru kana kuti Pontif) wezvakavanzika zveBabironi muna 63 BC, chitendero cheBabironi ichi chakaparidzira kurudziro yacho muhushe hweRoma hwese. Hushe uhu hwaive hwakamiririrwa nemucherechedzo wemakumbo edare mumufananidzo waDanieri wemuHedeni. Chinzvimbo chechipegani chaPontif chakabva kuna Kesari weRoma yechipegani, aive asingadi kuti vave maKristu, kuenda kuna Pope weRoma mumakore akapoteredza 400 AD. Zvakavanzika zveBabironi zvaive zvapinda mukereke yechiKristu. Zvidimbu zvedare zvaive mutsoka dzemufananidzo chikamu chezvakavanzika zveBabironi zvakamedzwa mutsika dzeRoma yechipegani.
Mupostora Johane, muBhuku raZvakazarurwa, akabva abatawo nhorondo yezvakavanzika zvekuBabironi izvi sezvazvaipararira mukereke pakutanga kwenguva dzemakereke muTestamente Itsva dzararama kwemakore 2000.
Chimwechete chezvakavanzika zveBabironi chasvibisa kereke kufungidzira pamusoro peramangwana revanhu fungidziro dzacho dzichibva pamamiriro enyeredzi--- sekunge nyeredzi dzacho dzitori neramangwana remunhu rakanyorwa madziri. Izvi zvinoderedza maKristu kusvika pakutenda muzvinhu zvekare. MaKristu anobva atsvaga kutungamirirwa nevanhu vanoita nezvenyeredzi pachinzvimbo cheBhaibheri neMweya Mutsvene.
Kunyange zvakadaro, uhu hunyengeri hwakanakira kudzosera shure kutenda kwemaKristu. Hakuna munhu anofanira kupinda pakati paMwari nemutendi.
Nei tsananguro dzezviratidzo zvenyeredzi dzichiita sedzechokwadi?
Nekuti hazvina chokwadi zvachose uye zvine dudziro inodarika imwechete, pazvinokuudzai zvamunoda kunzwa pamusoro pehupenyu hwenyu. Mutambo wakangwara pakati pezvinhu zvinotsiura hupenyu hwenyu, zvinokurirwa nehunhu uye masimba anokunyengerai.
Tarirai chimiro chinonyanya kushandiswa nevanoita zvenyeredzi zvakanyanya. Kubudirira kwacho ndekwekuti zvachinotaura zvinokwanisa kushanda pane chero munhu.
“Zvimwe zvezvinhu zvinokukurudzirai zvinoita sezvisina maturo. Dzimwe nguva munenge muri munhu anodyidzana nevanhu zvakanyanya, muchishamwaridzika, muchigarisana nevamwe zvakanaka asiwo dzimwe nguva munenge musingadi zvevanhu, makasungikana uye musingadyidzane nevanhu zvakanaka. Munenge muchiona zvisina kuchenjera kuzvizivisa zvamuri kuvanhu. Munozvida kuzviita munhu anozvifungira musingagamuchiri mazano evamwe kana asina tsigiro kana humbowo hunokugutsai. Munosarudza chikamu cheshanduko nehuwandu hwezvinhu hwakasarudzika, moshaiwa kugutsikana kana mukaisirwa miganhu nekubvisirwa zvimwe. Dzimwe nguva munosara musina chokwadi chekuti maita sarudzo dzakanaka here kana kuti maita chinhu chakanaka here. Kuita hunhu hwakanaka kana kudzoreka kunze, munoita semunoshushikana uye musina kusimba mukati ... asi muine kumwe kuneta pahunhu hwenyu, munenge muchingogona kuzvibata chete . Mune masimba akawandisa amusingashandisi anokwanisa kuita kuti zvinhu zvikuitirei zvakanaka. Munoda kwazvo kuti vamwe vanhu vakudei uye kuti vakurumbidzei.”
Zvese zvinoita sezvakachenjera uye zvinofadza. Asi angori mashoko mazhinji anotaurwa pasina chaicho chine musoro chamunenge muchiudzwa. Zvinhu zvakaipa zvishoma shoma zvinotaurwa (zvakanaka sekuti hakuna munhu akarurama saka zvinobva zvaita kuti zvinzwike setsananguro dzechokwadi) zvinhu zvakanaka zvinobva zvataurwa zvinobva zvasiya munhu achinzwa kufara pamusoro pehupenyu hwake. Zvinhu zvakanaka izvi zvinotiita kuti tide kunzwa zvizhinji, saka tinobva taverenga pepanhau resvondo ramangwana parinobudira.
Tinokugamuchirai kuzviratidzo zvenyeredzi. Kupindwa pfungwa kwakachenjera mumafungiro edu.
Tarirai zvakataurwa. “Dzimwe nguva munodyidzana nevanhu zvakanyanya.... dzimwe nguva munoda kuva muri mega”. Izvi zvinotaura pamusoro pevanhu vese.
“Hamuna chokwadi chekuti makaita sarudzi dzakanaka here kana kuti makaita chinhu chakanaka here kana kuti kwete”. Izvi zvinosanganisa zvese zvinokwanisa kukanganisika. Mangoita sarudzo yakaipa. Ndicho chinhu chakanaka, zvatinokanganisa zvese isarudzo dzakaipa. Handingadi nyeredzi kuti dzindiudze izvozvo.
"Mune simba zhinji risiri kushandiswa mamuri ramusiri kushandisa kuti zvinhu zvikuitirei zvakanaka.” Izvi zvinotsanangura chero chinhu chafamba zvakanaka. Mune simba iri guru rekubudirira asi hamurishandisi, asi iri ranga riri vhiki renyu rerombo rakanaka sezvo matanga kushandisa simba renyu rakavanzika.
Kana pasina chiri kufamba zvakanaka, wanga usiri kungoshandisa simba rako.
Tarisai shoko rinofadza risina zvarinoreva rekuti “simba”. Rinogona kureva chero chinhu.
“Munosarudza chikamu cheshanduko uye sarudzo dzekusarudza kubva kwadziri.” Kwenguva zhinji maitikiro ezvinhu muhupenyu hwedu anongoenderera mberi. Asi zvimwe zvakanaka zvimwe zvakaipa zvinongoitika kwatiri. Izvi zvinobatwa nekutaura kusina maturo kwekuti “dzimwe shanduko”. Izvi zvinokwanisa kubata shanduko duku kana shanduko huru pasina kunyatsotaura chinhu chaicho. Saka vari kutaura kuti dzimwe shanduko dzichaitika muhupenyu hwenyu, dzinokwanisa kuva dzakanaka kana dzakaipa, uye shanduko idzodzo dzinokwanisa kukura kana kuita duku. Izvi zvinongobata chero chinhu chinokwanisa kuitika kwauri nenzira yakachenjera.
“Kuda kukuru kudiwa nevamwe”. Izvi ndezvechokwadi kumunhu wese. Tese tinoda kudiwa nevanhu.
Vanotarisa zviratidzo zvenyeredzi vanoramba vachidzokorora kutaura kwakadai nenzira dzakasiyana-siyana dzakawanda. Asi ndapota dzidzai kuti hatina chakakosha chatati tadzidza. Pangori nepfungwa iyi isina zvainoreva yekuti zvimwe, muchivande, nyeredzi dzedu dziri kutitungamirira.
Asi isai zviratidzo zvenyeredzi pakuedzwa kuri nyore. Kumbirai shamwari kuti icheke fungidziro gumi nembiri dzevhiki iroro kubva mupepanhau kana mumagazini. Chekai misoro yenyaya “Leo” “Taurusi” nemimwe yakadaro. Zvino tarirai yese iri gumi nemiviri mutsvage kuti ndeipi iri kunyatsotsanangura vhiki renyu zvakanaka, kana kuti vhiki rakadarika monyatsotevera zvakanaka zuva nezuva nekuswedera kunenge kuchiita vhiki rinotevera. Hazvisi nyore kuti mugononga chiratidzo chenyeredzi chaicho chezuva ramakaberekwa imi.
Muedzo wechipiri. Tengai mapepanhau akasiyana-siyana nemamagazini evhiki iroro. Tarisai chiratidzo chenyeredzi yenyu mutarise kusiyana kwezvazvinotaura. Kuipa kwazvo, tsvagai horosikopu yechiChina muone kuti yakasiyana sei nehorosikopu yekumadokero. Motarisa horosikopu yekuIndia iyi yakatoshandwa nemitemo yakasiyana nekure.
Dambudziko guru riri kuchikamu chenyika dzekuchamhembe uko zviratidzo zvese zviri kumashure kwenguva nemwedzi mitanhatu. Airesi chiratidzo chepfumvudza kumawodzanyemba chinoitika munguva yematsutso muchikamu chenyika dzekuchamhembe. Saka munyika dzekuchamhembe, vanoshandisawo chiratidzo chenyeredzi chekumawodzanyemba zvisina maturo. Reo chinonzi chiratidzo chinotonga munguva yepakati pechirimo kumawodzanyemba apo kuchamhembe kunenge kuchitonhora zvekuwoma munguva yechando.
Kukanganisa kukuru kuri muzviratidzo zvenyeredzi idambudziko revana vakasiyana vanozvarwa nguva imwechete panzvimbo imwechete, asi vese vaine ramangwana rakasiyana. Zviratidzo zvenyeredzi hazvigoni kukunda panyaya iyi nekuti zvinotarisa kuti munhu anenge akazvarwa rini, kwete kuti ndiwe ani. Ndiwo mafungiro mamwechete anoita kuti kutongera nekuda kwemarudzi kukundikane. Kunotarisa ruvara rweganda, kwete kuti uri ani. Mapatya anouya nedambudziko rimwechete. Akaberekwa pamwechete nzvimbo imwechete mai vamwechete asi vanoita ramangwana rakasiyana zvachose.
Kana mwana akaberekerwa muchipatara, simba rekudonha rinenge richidhonza chivakwa rinenge rakasimba kakapetwa zviuru mazana mashanu kudarika simba rekudhonzera rinenge riri mupuraneti Mars pamwana iyeye.
Chiremba anenge aripo pakuzvarwa kwemwana, nekuti anga aripo, anoisa simba rekudhonzera rakakura zvakapetwa katanhatu kudarika simba rekudhonzera rine puraneti Mars pamwana.
Saka kutaura kuti nzvimbo iri puraneti, yakafanana neMars, panguva yekuzvarwa kwenyu inotaura ramangwana renyu, hazvina rutsigiro rwesainzi.
Kana tsunami kana imwe njodzi ikauraya vanhu vakawanda, tarisai horosikopu yevanhu vashoma vanenge vaita munyama wekufa ipapo munoona kuti havasi vese vaive vakanzi vachasangana nenjodzi panguva imwechete iyi. Muenzaniso ibhomba reatomi rakauraya makumi emamiriyoni evanhu paHiroshima nepaNagasaki.
Asi panewo dambudziko ritori guru kupinda iri.
Zuva rinotenderera mumiganhu yaro izvi zvinoita kuti miganhu yaro iwedzere. Kuwedzera kwemuganhu uku kunoisa kumanikidzika panyika zvoita kuti nyika itenderere sedenga rinokunguruka. Makore anoda kukwana 2000 ega ega nyika inotenderera ichipinda nemuchiratidzo cheZodiac. Makore akapoteredza 2000 BC chiratidzo chepfumvudza chaive Airesi Hwai. Iyi yaive nguva yaAbrahama apo Mwari akapa gwai sechipiriso pachinzvimbo chaIsaka. Apa ndipo pakatangwa zviratidzo zvenyeredzi nevanhu vekuBabironi.
Makore 2000 aizouya yaizova nguva yekuuya kwaJesu. Nyika yaive yafamba kupinda nemuchiratidzo chepfumvudza cheHove. Jesu akadaidza varedzi vakaita saPetro, Jakobo, naJohane kuti avaite varedzi vevanhu, kuti vaunze mweya yevanhu kuzotendeuka.
Apa akuda kusvika pamakore 2000 kumberi nyika yakafamba ikapinda muchiratidzo chepfumvudza Aquarius, gate rekutakurisa mvura rinoratidzwa richirasa mvura kubva mugate.
Izvi zvinoreva kuti zviratidzo zvenyeredzi zvese zvakasuduruka nezvinzvimbo zviviri kubva pakatangwa zviratidzo zvenyeredzi neBabironi. Kana makaberekwa ngatitii musi wa 23 Kurume, nhasi hamusisina kuberekwa muchiratidzo Airesi Gwai mave veAquarius. Asi pamufananidzo wenyeredzi unoramba uri nezviratidzo zvenyeredzi zvekuBabironi zvemakore 4000 akadarika. Izvi zvinoratidza kuti nhasi hazvisisiri zvazvaive.
Saka zvinyorwa zvenyeredzi zvatinazvo nhasi zvakakanganisika zvakanyanya. Saka zvinoshamisa here kuti fungidziro dzevanoita nezvenyeredzi ndedzekunyepa?
Zviratidzo zvenyeredzi zvekushopera zvakapa chiso chakaipa kwazvo kunyeredzi zvekuti maKristu anototya kufunga kuti nyeredzi dzinokwanisa kureva chimwe chinhu chakanaka. Asi nyeredzi yakatungamirira vazivi kut vanosvika kwaive naKristu.
Ichi ndicho chakavanzika. Nyeredzi hadzitiudzi nezvedu asi dzinotiudza pamusoro paKristu.
Testamente Itsva inotiudza nezveKuuya kwaJesu kwekutanga akaberekwa nemhandara, akapimwa pamwe nemhondi Barabba, akarovererwa kuti zvivi zvedu zvibviswe, sezvo zvivi zviri rumborera rwerufu runotiendesa kugehena.
Kuchibva kwatevera nhorondo yekereke muzvikamu zvinomwe. Kereke yekutanga yaive nechokwadi, asi vakatambira hutungamiri hwevanhu vakarasikirwa nechokwadi munguva yerima. Mwari akatanga kudzosera chokwadi cheruponeso, hutsvene uye kuparidzira, uye rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Kuchibva kwauya kudzoserwa kwekupedzisira tichidzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga. Nguva dzemakereke dzinopera apo Kristu seShumba yerudzi rwaJuda Anouya keChipiri kuzotora kereke achkwira nayo kuDenga.
Uku ndiko kurongwa kweEvangeri, saka zvinhu izvi zvose zvinofanira kuwaridzwa munyeredzi dzeZodiac.
Chii chinonzi Zodiac?
Zuva rinoita serinotevera nzira kana miganhu muchadenga masikati. Manheru tinoona nyeredzi dzinoonekwa kumashure kwenzira yezuva. Nyeredzi idzi dzese dzakagovaniswa muzvikwata gumi nezviviri zvatinodaidza kuti mapoka enyeredzi. Vanhu vekuBabironi vakabva vapa boka rimwe nerimwe renyeredzi zita. Tinotanga neVirgo Mhandara tichiguma neLeo Shumba. Mapoka enyeredzi aya ari parutivi neparutivi, achimiririra Kuuya kwekutanga neKuuya kwechipiri kwaJesu.
Nekuti vanoita nezvekushopera kwenyeredzi vakaparidza nhema zhinji pamusoro penyeredzi, tinokwanisa here kuti Mwari anoda kushandisa nyeredzi kutiudza zvimwe zvinhu?
MAPISAREMA 19:1 Kudenga-denga kunoparidzira kubwinya kwaMwari; Uye denga rinoratidza basa ramaoko ake.
4 Rwonzi rwokuyera rwazvo rwakasvika kunyika yose, Namashoko azvo kumugumo wenyika. Akagadzirira zuva tende mukati mazvo.
5 Iro rakafanana nechikomba chinobuda mumba macho, Rinofara semhare kumhanya nenzira yaro.
Zuva rinomiririra Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, iye sechikomba ari kunodaidza kereke yechokwadi semwenga wake yaakatungamirira mukati memakore 2000 enhorondo yekereke.
Tabernakeri inotaura pamusoro penzvimbo inoitikira zvinhu.
Saka nyeredzi dziri kumashure, mumapoka gumi nemaviri enyeredzi, dzinogadza hurongwa hwezviitiko zvichaziviswa nazvo zano raMwari guru reruponeso.
Ngatitarisei kurongwa kwezviratidzo zveZodiac.
Pakuuya kwake kwekutanga, Jesu akazvarwa nemhandara Maria.
ISAYA 7:14 Naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai, mhandara ichava napamuviri, ichabereka mwanakomana, ichamutumidza Imanueri.
Zviyero zvinomiririra kutongwa apo ruzhinji rwevanhu runofanira kupima rwosarudza pakati paJesu (anounza Hupenyu husingagumi) nemhondi Barabba (anounza rufu). Vazhinji vakasarudza rufu.
DANIERI 5:27 TEKERE, iwe wayerwa pachiyero, ukawanikwa wakareruka.
MaJuda vakawanikwa vakareruka nekuti vakaramba Messiasi wavo. Tembere yavo yaizoparadzwa, uye ivo vaizodzingwa kubva muIsraeri kwemakore anoda kukwana 1800.
MaRoma akaroverera Jesu pamuchinjikwa paakaripira muripo wezvivi zvedu.
Rumborera rwerufu ndizvo zvivi. Kana tikafira muzvivi toenda kugehena. Saka Jesu akabvisa rumborera rwerufu nekuti takaregererwa zvivi zvedu, kana tikatendeuka, saka nekudaro tinogona kuenda kudenga. Calvari inomiririrwa nechinyavada, chine mbiri yehuturu hwachinoburitsa kana chikaruma munhu.
I VAKORINTE 15:55 Iwe rufu rumborera rwako ruripiko? Iwe bwiro kukunda kwako kuripiko?
Zvakazarurwa Chitsauko 6 inotarisa zvishoma kusimuka kwaantikristu mukereke.
Judasi, munhu muvengi vechokwadi mukuru, aive mumwe wevadzidzi. Satani anoita kuipa kwake kukuru ari mukati mukereke chaimo.
Murume wevuta anotanga kutasva kwake. Ane vuta asi hapana kutaurwa nezvemiseve. Uyu murevi wenhema. Saka kunyengera kwechitendero, tichiudzwa zvinhu zvakasiyana nezvinorehwa neBhaibheri, ndiyo nzira inopinda naSatani mukereke.
ZVAKAZARURWA 6:2 Ndikatarira, ndikavona bhiza jena, naiye wakanga akaritasva, wakanga anovuta; akapiwa korona, akabuda achikunda, vuye kuti akunde.
Mumashure megore 312 AD mubati weRoma Constantine akaita kereke yeRoman Catholic sangano rekutanga rekereke nerutsigiro rwake rwezvematongerwo enyika. Kereke yakazivisa zvitendero zvakawandisa zvisina kunyorwa muBhaibheri. Vapikisi vekereke vakatanga kuurayiwa, kuiswa muhupoteri, kutorerwa pfuma yavo, vachipedzisira varwadziswa kusvikira vafa. Zvino makore akapoteredza 960 AD Pope Nicholas I akagadzwa akapihwa korona, vakamuita akaenzana namambo. Nekukasika mumashure megore 1300 AD korona iyi yakanga yakura kuita korona yaPope yezvidanho zvitatu. ChiRoman Catholic chakapamba Europe muNguva dzeRima, chikapararira nepasi rese kubva ipapo.
Mbudzi dzinomiririra hondo muhutungamiriri hwekereke. Mbudzi ndiye mutungamiri akaipa wehwai. Hakuna munhu ari musoro wekereke, Jesu ega ndiye muridzi wechinzvimbo ichocho.
Pakutanga maKristu aive vanhu vashoma munzvimbo dzinogara vanhu, uye vaiwanzopararira nekutya kuuraiwa nevabati veRoma.
Vaivimba naMwari zvakazara uye nehutungamiri hweMweya Mutsvene.
Asi nekufamba kwenguva, hutungamiri hwevanhu hwakatora kereke. Dzidziso dzakaitwa nevanhu dzikapindira. MaPasita vakava misoro yekereke pachinzvimbo chaKristu, kunyange izwi rekuti “mufudzi” parinoreva kuti pasita rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva.
Nekufamba kwenguva kereke yakatanga kusimudzira vanhu kuti vaitungamirire, zvekuti vakatanga kuti guta rega rega rinofanira kuva nabhoshopu anoritungamirira. Hutungamiri hwevanhu whakabva hwava nhava ine zvakasangana. Dzimwe nguva vanhu vakanakisa vaive vatungamiri, asi kazhinji vanhu vaibva vaisa pfungwa dzavo dzese pakuva nesimba, mari, mbiri, uye kubudirira munezvematongerwo enyika. Hutungamiri hwevanhu hwakazarura mukova kuti mbudzi dzipinde sezvo “chiKristu chemabasa” chakaona vanhu vane shungu dzebudiriro vachitungamirira kereke ichibva ichienda kure kure neShoko rakanyorwa muMagwaro uye ichibva pamuenzaniso wekereke yeTestamente Itsva.
Teererai Pope Francis nekuzvidza kwake kuita kwemakadhinari muVatican.
Hakuna pasita akambova mutungamiri wekereke mukereke yeTestamente Itsva. Nguva inongotora pasita simba rekutonga mukereke, muenzaniso wekereke yekutanga unobva waparadzwa. Mwari anobva abva pakutungamirira kereke iyoyo.
Mutakuri wemvura anomirirwa nemufananidzo wemunhu achirasira mvura pasi. Zvakadaro akasara akabata gate risina chinhu.
Muna 325 AD Constantine akaita kereke yeRoman Catholic sangano rekutanga rekereke, akamanikidza mabhishopu aivepo kugamuchira zvitendero zvaive zvisina kunyorwa muMagwaro. Chokwadi cheBhaibheri chakabva charaswa.
Mvura mucherechedzo weMweya waMwari uye Shoko raMwari. Maive masara Mweya waMwari mushoma kwazvo mukereke yakawana simba nekutendera zvematongerwo enyika uye kubvumirana nezvitendero zvemapegani. Rudo rwemaKristu uye kuvimba kwavo kwakadeurwa kukarasika, zvikurusa zvekuti, kunyange muna 300 AD kereke yairovererwa nekurwadziswa, zvakadaro makore zana akatevera kereke yaiuraya nekurwadzisa maKristu aisatenderana nayo.
Sekubva kwakaita chiKristu chemasangano paMagwaro, (vaprista vakudaidzwa kuti fata uye havatenderwi kuroora) saka hwaro hwakaderera mvura dzeShoko dzikadeurwa pakapindira dzidziso dzakaitwa nevanhu .
MATEO 23:9 Musaidza munhu uri panyika baba venyu, ...
I TIMOTIO 4:1 Zvino Mweya unoreva pachena, kuti panguva dzinovuya vamwe va chatsauka pakutenda, vachiterera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa,
I TIMOTIO 4:3 Vachidzivisa vanhu kuwanana,
Munguva dzaive dzakaoma idzodzo maKristu akarwa zvakaomarara vakabvisa vapikisi, Bhaibheri rikabviswa kuvanhu. Maprista chete ndivo vaitenderwa kuverenga Bhaibheri muchiLatini nekuti ndiwo ega maBhaibheri aivepo. Europe yaive yatanga kusvedza ichipinda muchando, rima, zviyerayera, uye tsvina. Chiedza cheShoko raMwari chaive chatanga kudzima. Vanhu vaive vave midziyo isina chinhu neruzivo rushoma kana kutoshaiwa ruzivo pamusoro peBhaibheri. Kereke yakabatana nezvematongerwo enyika yakatanga hukama hwemachinda, mapope nemaprista. Vanhu vaitenda kuti vaikwanisa kutenga kuregererwa kwezvivi zvavo.
Hove yaive chiratidzo chekereke yekutanga payakarovererwa nekurwadziswa. Hove inogara isingaonekwe pasi pemvura. Munguva yekereke yekutanga vabati veRoma vakauraya maKristu kwemakore anoda kusvika 250.
Asi zvakabva zvawedzera apo kereke yeRoman Catholic yakatanga kuuraya maKristu vaisawirirana navo. Izvi zvakanga zvakadaro kwemakore anoda kusvika 1 100 kusanganisira Nguva yeRima apo kereke yeRoman Catholic yakatanga kuuraiwa kwakasiyana siyana kwevaivapikisa, vakatangawo bvunziridzo dzakaipa dzekuSpain. Makumi emamiriyoni evaive vasiri maCatholic vakarwadziswa vakauraiwa.
Chokwadi cheBhaibheri chakabva chavigwa mutsvina yeNguva yeRima, zvikaita sekuti kereke yechokwadi yaive yaparadzwa. Asi sehove yakavanda inokwanisa kusimuka kuuya pamusoro pemvura zvakare, saka vatendi vaive vakavanzwa vakapona muNguva yeRima, chokwadi chikamuka kubva kurufu munguva dzinodakadza dzeMutsiridzo yaMartin Luther.
JONA 1:17 Jehovha akatuma hove huru kundomedza Jona, Jona akava mudumbu rehove mazuva matatu nousiku hutatu.
Iyi ndiyo yaive nguva yaive nerima kwazvo kuna Jona, akavigwa pasi pemvura asingaonekwe. Asi hove yakabva yamuunza zvakare kunyika.
Hondohwe yehwai: Baramu muTestamente Yekare aida kutaurirana naMwari aiziva kuti kana achida kuita izvi aifanira kupira gondobwe nenzombe.
NUMERI 23:29 Bharamu akati kuna Bharaki, "Ndivakire pano aritari nomwe, undigadzirire pano nzombe nomwe namakondohwe manomwe."
Mumashure mekurasika kwechokwadi muNguva dzeRima kereke yaifanira kudzokera kunzira yaMwari yeBhaibheri. Gondobwe raimiririra vamutsiridzi vekutanga vakaita saMartin Luther aiudza vanhu kuti vatendeuke vagamuchire Jesu seMuponesi wavo. Gondobwe rinotunga nemusoro waro. Luther, mumonk aive asina kutya maari, akatunga nemusoro wake dzidziso dzekereke yeCatholic akakunda.
Nzombe yakatevera. Iyi imhuka yakasimba. John Wesley akadzosa hutsvene akaparidzira evangeri zvakagadzirira nzira kunguva yakanaka yemamishinari yerudo pakati pehama munaShe zvakatora Evangeri rikaparidzwa pasi rese. Hutsvene, kuparidzira, nemabasa emamishinari, nerudo kuhama nekunevakarasika-- izvi ndizvo zvinhu zvinosimbisa chiKristu.
Mapatya: Mugore 1906 kuita kwePentekositi muAmerica kwakadzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene nekudzoka kwezvipo zveMweya unoshamisa. Jesu anofanira kuva musoro wekereke, asi hutungamiri hwevanhu nekukasika hwakabva hwapindira hukabata kuita kwePentekositi. Izwi rekuti “pasita” (mufudzi) rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva, asi neimwe nzira hushumiri uhu hwakabva hwabvuta chinzvimbo chaJesu chekuva Musoro wekereke. Saka Mweya Mutsvene nehutungamiri hwevanhu zvinorwira simba rekutonga kereke.
VePentekosita vakadzosa zvipo zveMweya mukereke. Iyi yaive nhanho huru kwazvo.
Asi kune kumwe kuita kwemumwe wemapatya kunofanirawo kuitika.
Kumwe kudzorerwa kuri kudiwa – kudzorerwa kwedzidziso yechokwadi yekereke yekutanga yemapostora. Saka Mwari anofanira kutumira muprofita kuti atidzosere pakuita kwekereke yekutanga.
MATEO 17:11 Akapindura (Jesu), akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Johane Mubapatidzi akazivisa rubapatidzo rwemvura uye Messiasi kumaJuda. Johane Mubapatidzi haana chaakadzosera maJuda kwachiri. Saka Eria anorehwa nevhesi iri haasi Johane Mubapatidzi.
Pano Jesu anotaura nezveumwe muprofita anozodzosera kereke pakutenda kudzidziso yeTestamente Itsva. Mapostora akateya nheyo dzechokwadi dzeTestamente Itsva uye chizhinji chechokwadi ichi chakarasika muNguva yeRima. Izvozvi chinofanira kudzorwa kwatiri.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya; vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi.
Kuita kwemapatya(the twins): Pentekosta nekudzorera zvipo zveMweya, uye hushumiri hwechiprofita huchidzosa chokwadi chemapostora.
Gomarara (Cancer) inomiririrwa neGakanje: Gomarara rava chirwere chikuru kwazvo uye chikonzero chekufa kwevazhinji munguva ino yekupedzisira.
Gakanje rinogara zvese panyika nemumvura, pachasvikomira Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 paanouya pasi kuzomutsa vakafa vakavigwa panyika kana mugungwa.
Gakanje rinofamba nemativi zvinoriita rakasiyana nezvimwe zvipenyu zvese. MaKristu enguva yekupedzisira anofanirakupfeka zvakanaka nekutevera Bhaibheri kuti afambe zvakasiyana nemafambiro evamwe vanhu vese.
Gakanje rine gwati rakaomarara pamuviri waro rinorichengetedza, maKristu nhasi anoda gwati remweya rakasimba kuti rivachengetedze, sezvo vane kutukwa kukuru kuri kukandirwa kwavari kana vachitevera Magwaro vachifuratira tsika dzemasangano dzakaita seKisimusi (izwi risimo muMagwaro) musi wa 25 Zvita (zuva risimo muMagwaro) nemuti weKisimusi (usina chekuita nemuchidyiro kuBetherehema), uye chinhu chekuti hapana muBhaibheri patakanzi tipemberere kana kurangarira kuzvarwa kwaJesu.
Zuva rakazvarwa munhu rapembererwa rakataurwa chete muTestamente Itsva raive zuva rakazvarwa Herode paakauraya Johane Mubapatidzi.
Vazivi vakapinda mumba, kwete muchidyiro, vakaona Mwana, kwete rusvava. Hapana kutaurwa nezvaJosefa.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake,
Saka vazivi havana kusvika paakazvarwa. Vakamuwana ari mumba makore maviri akazotevera.
Asi chokwadi ichi chinoparadza nzira yekuita nayo mari panotengeranwa zvipo kuvana (zvese nevanhu vakuru) vachizviti zvipo zvekupemberera kuzvarwa kwaJesu.
Kana mukabvuma izvi munorwiswa kwazvo.
Saka gakanje rine tsono mbiri pamuromo dzakasimba dzekubatirira paMweya uye pachokwadi, zvisinei nekuipa kana hupikisi hwemasangano (rimwe izwi risimo muMagwaro).
Asi Mwari akatendeukira kumaJuda saka mukova kuvaHedeni uri kuvharika.
Gakanje rega richifamba nerutivi, ndiro rinokwanisa kusenerera nekamukana kaduku kasara.
Nguva yakutotiperera, nhanho inotevera ndiko kudzoka kweShumba yaJuda kuzotora avo vari kutevera Bhaibheri zvakazara.
Mwari akabvunza Jobo mubvunzo wakadzama.
JOBO 38:32 Iwe ungabudisa Mazaroti panguva yawo here? Kana ungagona kufambisa Arikituro navanakomana vayo here?
Mazaroti” izwi rechiHeberu rinotaura pamusoro peZodiac.
Munokwanisa kudavira mubvunzo wekutanga here? Mwari aibvunza Jobo, unogona kusika mapoka enyeredzi dzedenga here dzinoshopera makore 2000 enhorondo yevanhu?
Kana kuti ungafambisa zvinhu here kuti zvizadzise zvakashoperwa kare nenyeredzi idzodzo?
Uye mune zvaiitika, unogona kuripira muripo wezvivi here, wotungamirira kereke, nezvese zvainokanganisa, mukati menguva nomwe dzemakereke?
Munguva yekereke yekutanga mapostora akanyora Shoko rinova Mbeu yehupenyu husingagumi.
Mbeu iyi, setsanga dzechibage, dzakadyarwa dzikavanzwa mukati metsvina yeNguva dzeRima zvino Rumutsiridzo, semashizha anopfumvudza, rwakazivisa chokwadi chekuponeswa nekutenda. Zvino hurume hwakabva hwatorwa nemhepo mukati memunda munguva yemamishinari zvino hura hwePentekosita hukaberekwa. Asi hura hunoita sehunobva kumbeu painotanga kubuda mukati mayo. Mbeu yekupedzisira inokohwewa chete kana yakuonekwa yakafanana nembeu yekutanga yakadyarwa.
Saka Mwari haangotauri zvichauya chete, anozvizadzisawo nenzira imwechete yaakazvitaura nayo zvisati zvaitika.
Hazvishamisi kuti nei Bhaibheri rinoti ndangariro dzaMwari dzikuru kupinda ndangariro dzedu.